Momba anay - Shanghai Yucheng Machinery Co., Ltd.
Shanghai Yucheng Machinery Co., Ltd. dia mpanamboatra masinina sakafo toy ny milina encrusting multifunctional, kubba, Mochi Machine, cookie ary Bread Production Line, Moon cake (Maamoul) Production Line ary Steamed Buns Production Line, miaraka amina fitaovana fanandramana voaomana tsara ary hery ara-teknika matanjaka.
Omeo milina sy vahaolana azo antoka sy azo antoka ny mpanjifa. Ary amin'ny resaka varotra aorinan'ny varotra, hanomezana tolotra mahery vaika ny mpanjifa, hanatsara ny vokatra ny mpanjifa, ary ny roa tonta dia afaka miara-miasa, izay ny tanjon'ny orinasanay.
Ny sakafo dia zavatra tena ilaina amin'ny zanak'olombelona. Izahay dia manolo-tena amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny masinina sakafo hanatsarana ny sakafon'ny mpanjifa sy hanatsara azy, mba hahitan'ny olona manerana an'izao tontolo izao ny sakafo vita amin'ny mpanjifa, ary hahatonga ny sakafo ampiasain'ny mpanjifa manan-kery kokoa. Mamorona sary marika manome serivisy vaovao ho an'ny mpanjifa izahay.
Ny orinasanay dia manana ekipa teknika matihanina. Ny injeniera dia manana traikefa 20 taona mahery. Tompon'andraikitra sy matihanina ireo teknisianina. Manomeza ampitan-dranomasina aorian'ny serivisy fivarotana. Izahay dia nandinika ho anao mandrakariva satria ny tanjonay dia ny hanome ny mpanjifa milina sy serivisy manara-penitra ary manome vahaolana ho an'ny mpanjifa sy vahaolana azo antoka ary azo itokisana. Ary amin'ny resaka varotra aorinan'ny varotra, hanomezana tolotra mahery vaika ny mpanjifa, hanatsara ny vokatra ny mpanjifa, ary ny roa tonta dia afaka miara-miasa, izay ny hany tanjon'ny orinasanay. olombelona. Izahay dia manolo-tena amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny masinina sakafo hanatsarana ny sakafon'ny mpanjifa sy hanatsara azy, mba hahitan'ny olona manerana an'izao tontolo izao ny sakafo vita amin'ny mpanjifa, ary hahatonga ny sakafo ampiasain'ny mpanjifa manan-kery kokoa. Mamorona sary marika manome serivisy vaovao ho an'ny mpanjifa izahay.
Manana traikefa azo tsapain-tanana mihoatra ny 20+ taona eo amin'ny maso ivoho isika
Shanghai Yucheng Machinery Co., Ltd. dia mpamokatra matihanina amin'ny masinin-tsakafo mandritra ny 13 taona mahery miaraka amina toerana fanandramana voaomana tsara sy hery ara-teknika matanjaka. Manana milina Encrusting multifunctional sy tsipika famokarana izahay izay afaka mamokatra Mochi, Ice Cream Mochi, Pastry 、 Mofo Cake Mofomamy volana (Maamoul) 、 mofo misy steamed ary karazana sakafo maro hafa.
Fampahalalana momba ny fisoratana anarana amin'ny orinasa
Solontena ara-dalàna: Ramatoa Bi Chunhua
Toeto miasa: nosokafana
Renivohitra voasoratra: 10 tapitrisa (yuan)
Kaody mifehy ny trosa sosialy: 91310117057611339R
Laharana famantarana ny mpandoa hetra: 91310117057611339R
Fahefan'ny fisoratana anarana: fitantanana ny fanaraha-maso ny tsenan'ny distrikan'i Songjiang daty nananganana: 2012-11-14
Karazan'orinasa: orinasa tompon'andraikitra voafetra (fampiasam-bola na fananana olona voajanahary)
Fotoanan'ny asa: 2012-11-14 ka hatramin'ny 2032-11-13
Fizarana fitantanan-draharaha: Distrikan'i Songjiang, Shanghai
Daty fankatoavana: 2020-01-06
Adiresy voasoratra: Room 301-1, Building 17, No. 68, Zhongchuang Road, Zhongshan Street, Songjiang District, Shanghai
Sehatra fandraharahana: kojakoja mekanika sy kojakoja, bearings sy kojakoja, akora vy sy vokatra, kojakoja fonosana, vokatra vita amin'ny fingotra sy plastika, fitaovana mekanika sy herinaratra, vokatra elektronika, fitaovana elektrika sy kojakoja elektronika, fitaovana, kojakoja sy fitaovana elektrika, fitaovana, bobongolo ary kojakoja ambongadiny sy antsinjarany; Fampivoarana ny teknolojia, famindrana teknolojia, fifampidinihana ara-teknika, serivisy teknika amin'ny sehatry ny milina sy ny fitaovana ary ny teknolojia, tafiditra amin'ny asa aman-draharaha manafatra sy manondrana entana sy haitao, voafetra amin'ireo asa-sampana manaraka ireto: milina sy fitaovana (afa-tsy fanodinana manokana).